Ikhaya / izesekeli / Izesekeli zefenisi / WOWOW Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Isixhumi Hose Female Female
izixhumi zamanzi zokuphephela amanzi kulula ukufaka futhi zingaphathwa kalula ngumuntu oyedwa. I-anti-drain valve eyakhelwe ngaphakathi iqinile futhi akukho lula ukuyijikisa.
Ukuzikhipha komugqa wamanzi we-Braised:
Ifanele umcengezi ompompi nowompompi basekhishini, kuwo womabili amanzi ashisayo namakhaza usebenzisa.
Imigqa ye-tucai eqinisekisiwe ye-cucC: indawo yangaphandle ye-nylon yangaphandle, i-PX hose yangaphakathi, i-nati enamakhanda aphelele, isixhumi sethusi esiqinile.
Usayizi Ojwayelekile wase-US: I-M10 * 1, 9/16, 500 mm / 19.7 intshi ubude, 11 mm ububanzi bokuxhuma, ukupakisha kahle nangokuqina ukuqinisekisa ikhwalithi
ISIQINISEKISO SONYAKA-5, INKONZO YAMAKHASIMENDE: Kunikezwa iwaranti yeminyaka emihlanu kanye nokwesekwa kwamakhasimende. Ihlanganise ukubuya kwamahhala kwezinsuku ezingama-5.
Ikhwalithi ilunge impela, umbala uhlanzekile futhi muhle, ukubukeka kulula, futhi okuhlanganisiwe kunesimo sasemkhathini. Izinduku zibushelelezi, zigcwele impela, zisebenza kahle kahle, azikho izimbotshana, isicwebezelisi esihle, zincane futhi zihle kakhulu design, futhi ukwakheka kahle kakhulu Umsebenzi wobuciko ubukeka uphela kakhulu. I-screw cap ifakwe isibambo se-booster, esikulungele ukufaka. Ungaqiniswa ngaphandle komcingo, osebenziseka kalula!
Izimbiza zekhishi lasekhishini ngokuvamile zidinga kuqala ukulungisa izingxenye zesikhonkwane ngamaphabha enjoloba, zibhoboze umgodi obandayo wamanzi ukusuka phezulu kuya phansi, bese usebenzisa isicaba somgodi ukuvala empompini wesikhuthu phansi ezansi kopopo ngewashi nangehora Ukuxhuma kuqinile futhi kuqinile, bese uklaza ukuphela kwe-hose ngokwewashi kusixhumi esisexolweni.
I-SKU: X1004 Categories: Izesekeli zefenisi, izesekeli Tags: Isixhumi se-faucet, Isicu sokuxhuma sefektha, I-faucet Hose